Slimbook: yakasarudzika hurukuro yeLinuxAdictos | Linux Vakapindwa muropa
Slimbook: yakasarudzika kubvunzurudzwa kweLinuxAdictos
Kubva kuLxA isu takaburitsa yakanyanya yakawanda nhau nezve kutanga uye mafambiro ari kuitwa nekambani yeSpanish Slimbook, sezvo yauya kuzochinja nyika yekomputa munyika medu nekunze, sezvo vachigamuchira mirairo kubva kune dzimwe nyika. Iyi ndeimwe yedzimwe nzira shoma dziripo dzekuwana michina pasina kubhadhara rezinesi reMicrosoft Windows, kureva, michina yakachena isina pre-yakaiswa Microsoft proprietary operating system. Ukatadza izvo, unogona kusarudza kana iwe usiri kuda kuti OS iiswe kana iwe uchida kugadzirira-kushandisa GNU / Linux kugovera ...
Kusvikira pakuonekwa kwerudzi urwu rwevagadziri kana vaunganidzi vemakomputa nedesktop, dzimwe nzira dzevaya vaida komputa ine mahara sisitimu yekushandisa yaive yekutora komputa neMicrosoft Windows, saka iwe wakabhadhara imwe Microsoft rezinesi, wozoisa panjodzi yekurasa warandi nekubvisa ino sisitimu yekuisa iyo yekupedzisira sisitimu inodiwa nemushandisi Zvino nekuda Slimbook kuedza isu tine zvikwata zvine enviable Hardware, mhando uye nehurongwa hwatinofadza!
LinuxAddict: Slimbook yakauya sei? Ini ndinofunga chaive chinhu chine njodzi, nekuti mugove wemusika weLinux hauna kukwirira seweWindows nhamo.
Slimbook: Isu tiri veSpanish SME, makambani mahombe haafarire zvikamu zvidiki zvemusika, uye ivo havazive maitiro ekushambadzira eguerilla, kana kuve muzvirongo. Hatina kumbobvira tagamuchira vatumwa vakasaina macheki ekutanga chirongwa, zvese zvavepo kubva pakutanga kubva pakuisa uye kuisa mukuedza. Chii chinogona kutadza kana iwe ukaita chimwe chinhu nerudo? Zvese? Pamwe, asisei wakanyora bhuku?… Zvakanaka, zvakafanana asi neimwe dhizaini yemakadhi.
LxW: Zvirokwazvo pakanga paine kudiwa, mukaha pamusika. Mazhinji emidziyo yemakomputa inotengwa inouya neWindows pre-yakaiswa kana neMacOS uye zvinoreva kubhadhara marezinesi eaya masisitimu hongu kana hongu. Kunyangwe iwe uchizobvisa masystem aya gare gare uye nekuisa imwe GNU / Linux distro. Wakambofunga nezvekunze kwekuzvipira kune yakavhurwa sosi uye rusununguko kune iyo nyika ye Hardware? Semuenzaniso neakavhurika firmware ...
SB: Kana iwe uchitaura nezve Libreboot kana Coreboot ine firmware, taura kuti parizvino havatsigire ma processor ezera rekupedzisira reIntel, uye zvishoma patakatanga kuti vaive mazera maviri kumashure.
Takataura naRichard Stallman nezve Intel firmware uye akatiudza kuti izvozvi hapana chatingaite, asi aive nechivimbo chekuti rimwe zuva tichakwanisa kushandisa reverse engineering kuti tibudise Hardware kubva kuiyo firmware.
Isu tinodzoreredza purofiti yedu munharaunda yemahara uye ndinovimba tinokura zvakakwana kuti tikwanise kuisa makadhi edu patafura, kusvika panguva iyoyo, isu tinoramba tichifamba munzira chaiyo kana kuita zvese musimba redu.
LxW: Iwe zvakare wagadzira iyo Linux Center chirongwa uko ini ndakave nemukana wakanaka wekubatana nevamwe vadzidzisi vema microprocessors neLinux, mukana wakanaka wekugovana nenharaunda yese chikamu chezvandakaburitsa mune yangu C2GL kosi uye bhuku rangu bhuku reBitman's World. Pfungwa yekusika Linux Center yakauya sei?
SB: Linux inharaunda, uye sevakawanda vedu takave nebhurogi rekugovana ruzivo, vazhinji vedu takambofunga nezvekuparadzira Linux kushamwari kana mhuri, kuti tikwanise kuvapa "chaiwo makirasi". Asi isu hatina kusarudzika, sei isu tese tisinga zviite? Aya ndiwo mabudiro akaita Linux Center, uye pfungwa yacho yaive iri mupfungwa dzangu ndisati ndagadzira Slimbook. Izvi ndizvo zvinoreva kuva linuxero pamoyo, haugone kumira kutenda vadziki kana nharaunda nezvavanoita uye zvavakaita. Uye ndeipi nzira iri nani yekutenda iye kupfuura kuva mumwe wavo.
Uye sezvo sirogani yeSLIMBOOK inotora: IVA MUMWE WEDU.
LxW: Ichokwadi ndechekuti ndakada kubatana muLinux Center uye ndinotarisira kuzviita zvakare munguva pfupi, pamusoro pekutenda chipo chematanda awakandipa pakubatana. Asi kudzokera kuSlimbook… unounganidza zvishandiso iwe pachako kana kuti unozviraira kubva kune wechitatu?
SB: Sei? Muchiitiko chekuti mumwe muunganidzi anorega iwe kuti usarudze skrini mukati meiyo imwechete modhi? Isu takagara tichizvitaura, iwe unogona kuona mharidzo yedu kuYunivhesiti yeVilla-Real (UNED) mu2015. Asi isu tinopedzisa kuvaisa pano nekhibhodi, iyo sarudzo yakasarudzwa nemutengi.
LxW: Ichokwadi ndechekuti yako renji yemalaptop yakafara. Uri kuronga kuwedzera yako desktop desktop michina inopfuura iyo AIO CURVE uye iyo IMWE? (Kymera anga asati avhurwa panguva yekubvunza uyu mubvunzo)
SB: Munguva pfupi yapfuura iyo Kymera Aqua naVentus vakabuda, uye pawakandibvunza uyu mubvunzo handina kukwanisa kukupindura. Nehurombo, makambani anofanirwa kuve nehurongwa hweramangwana uye zvakavanzika zvidiki kuitira kuti makwikwi arege kuita zvakafanana pamberi pako. Nekuti makwikwi anoziva zvishoma nezvekutevedzera pachawo.
LxW: Ehe, ndakazvizivisa iyo Kymera yakatarisa pane maviri emablog edu… Sezvaunoziva, iyo nyika yeLinux mutambo wemitambo urikubva kumhanya zvine mutsindo. Makore mashoma apfuura pakanga pasina kana mitambo yemavhidhiyo paLinux uye ikozvino pane zviuru zvacho uye ivo vari kuve vanozivikanwa zviri nani uye epamusoro mhando mazita, kunyangwe mamwe AAA. Iwe unoona zvingangoita muPC GAMING yeGNU / Linux?
SB: Zvakafanana nepakutanga, handina kukwanisa kukupindura pawakandibvunza uyu mubvunzo.
Iye zvino unoziva kuti tarova tafura, tavhura iyo ine simba kwazvo GAMING komputa yakagadzirirwa GNU / Linux netsika yemvura Refigraicón.
Isu tiri vadiki, asi semusoro wekambani hombe wakandiudza: hombe inotarisa pane zvaunoita uye kana mushure memwedzi zvichikushandira, vanoongorora vachiita zvakafanana.
LxW: Iyo 2018 Open Expo mubairo wakakuitira sei? Tiudze…
SB: Tiri kufara kwazvo, nekuti isu hatina kutarisira mubairo uyu, kutaura chokwadi ndakato pindura gore rapfuura mukubvunzurudzwa nenhau yakakosha "mibairo ndeyevamwe, tinopasa" asi ndaifanira kumedza mazwi angu, takanga tisina kufarira uye takakunda. Ini ndinogona kungoti ndatenda.
LxW: Ndeipi inonyanya kudiwa distro?
LxW: Iwe zvakare unopa mukana wekuisa akati wandei ekushandisa masisitimu, mune mbiri mbiri. Ivo vanokubvunza iwe chete yeWindows-Linux kana ivo vakukumbirawo iwe kune imwe yakati rebei yekuwedzera sisitimu yekushandisa senge FreeBSD?
SB: Isu takaudzwa kuti "isa ese lilnux aunogona, ini ndoda kuvaedza. Uye ndinofunga zvitanhatu kana zvinomwe zvakatumirwa kwaari. Ini handina kuzviita, asi hongu, tinoita zvakati wandei zvese zvavanotikumbira kuti tiite.
FreeBSD yakaiswa ne Adriaan groot (Kana iwe usingazive kuti ndiani, mutarise paWikiepdia), pane KDE / Katana uye akataura nezvedu kakawanda pablog rake. Asi kwete, hatina kuiisa… zvakadaro.
LxW: Uye sezvo isu tiine izvo zvido ... unoona here kuwedzera kwekudiwa kwemakomputa neakagara akaiswa Linux mubhizinesi chikamu kana vazhinji vevatengi vako vachiri vashandisi kutsvaga makomputa epamba?
SB: Ichokwadi ndechekuti tinotengesa zvese kumakambani nevanhu vamwe nevamwe. Ini handina kukwanisa kukuudza maperesenti izvozvi, iyo data inotorwa nemumwe wangu, asi hapana misiyano mukuda maererano nemaitiro.
LxW: Ichokwadi ndechekuti malaptop ako ane mhando yakanaka uye dhizaini yakanaka. Icho chinhu icho Apple yave ichikwanisa kuita zvakanaka kwazvo kubva pakutanga uye zvinoita sekunge muchikamu icho iyo Cupertino femu isingatonge iri yauya mumashure- Sei iwe uchifunga kuti vamwe vese vagadziri havana kuziva / vaida kushandisa mhando yemhando pamberi? Muchokwadi, kuchine vamwe vanogadzira malaptop vanosarudza epurasitiki zvigadzirwa uye vanopedzisa izvo zvinosiya zvakanyanya kudikanwa ...
SB: Handizive zvinofungwa nevamwe vaverengi, asi ini ndoda kupa vatengi zvandinoda kwandiri. Uye pachangu handidi Ferrari, asi kana vakanditendera kuti ndiityaire nemutengo mumwe chete seFord, pamwe ndingadaro. Ini handifanire, uye isu hatifanirwe kunge tiri vega vanofunga zvakadaro, handiti?
LxW: Uye ini ndinopedzisa nemubvunzo unenge wakasungirwa ... nekuti inobvunzwa nevanhu vazhinji vanoyemura kana vateveri ve AMD. Iwe unoronga kuvhura modhi ne AMD Ryzen (kana Zen kuuya)?
SB: Handikwanise kukupa ruzivo rwakavanzika….
LxW: Ikozvino kune zvakare kwakawanda kutaura nezve ARM, iyo, inotungamirwa naQualcomm, yanga ichienda yakasimba uye ine chinangwa chekubvisa x86 musika mubhuku remabhuku. Iwe ungafunge nezve ultrabook ine Snapdragon 1000 kana imwe modhi yenguva pfupi iri kutevera?
SB: Ivo havana simba raunoda, parizvino. Uye pamusoro pezvose, chengetedza mupfungwa kuti vagadziri veChinese vanogadzira makambani makuru epasi rese emakomputa, zvinoenderana nefekitori yega yega, ivo vanogadzira mabhodhi zviuru zvishanu kusvika zviuru gumi zvine ma processor, mwedzi wega wega. Iwe unofunga kuti kana ndikavabvunza mazana mashanu pamwedzi naSpapdragon ivo vanoenda kune kwavo kugadzirwa uye vatange kuongorora mafambiro ekuita chimwe chinhu chitsva chisina mumwe munhu anokumbira kwavari?
Mune mamwe mazwi: iwe unoziva kuti Linux idiki chikamu uye hapana yakasarudzika fekitori inoramba ichishanda yeLinux, uye kudzamara musika uchikura uye imwe kambani inotsigira yemahara software, senge SLIMBOOK, inokura nemusika, hatizokwanise kuisa mafekitori kubvisa zviuru zvemakomputa mwedzi wega wega.
Kusvika panguva iyoyo, shanduko dzatinobvunza kumafekitori haigone kuve backbones, senge shanduko kune mapurosesa ayo asati akaiswa pamalaptop.
Kutenda kwakawanda kuna Slimbook kweiyi bvunzurudzo… usakanganwa zvaunotaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Slimbook: yakasarudzika kubvunzurudzwa kweLinuxAdictos
Inodziya: audiobook player yeLinux